पढ्नै पर्ने यी तीन पुस्तक - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
पढ्नै पर्ने यी तीन पुस्तक
हरेकका आ–आफ्नै चाहना हुन्छन् । तिनै चाहनालाई मूर्तरूप दिन हामी आफूले चाहेका राम्रा काम गर्न रुचाउँछौँ । हप्तामा अन्य दिन हामी विशेष गरेर अफिसको काममा ब्यस्त भएपनि शनिवार भनेँ घरमै बसेर वा अन्य कतै गएर केही रमाइलो गरौँ भन्ने सोच्छौँ । तर कसैको पुस्तक पढ्ने चाहना पनि हुन सक्छ । यदि पुस्तक पढेर आजको विदा कटाउँछु भन्ने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईले यी तीन पुस्तक पढेर विदाको सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
१. बाबु, आमा र छोरा
विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको उपन्यास हो, ‘बाबु, आमा र छोरा ।’ यो उपन्यास साझा प्रकाशनले बजारमा ल्याएको हो । कोईरालाले यो उपन्यासमा व्यक्तिमा दमित इच्छा, भावना एवम् मनोद्वेगहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा आत्मनिर्णय गर्न दिइनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । त्यसैले, यो उपन्यास एकपटक पढ्नै पर्छ जस्तो लाग्छ ।
यो उपन्यास पनि साहित्यकार विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाद्वारा रचित उपन्यास हो । यसमा सुम्निमा र सोमदत्तबीचको प्रेमप्रसंगको यौन मनोविज्ञानको बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । यसमा एक व्राह्मणले आफ्नो धर्म त्याग्दा समाजमा के असर पर्दो रहेछ भनेर देखाउन खोजिएको छ । उपन्यासमा कोईरालाले प्रेमले मानिसलाई शारीरिक रूपमा टाढा बनाए पनि मानसिक रूपमा नजिक नै राख्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
३. शिरिषको फूल
साहित्यकार पारिजातले शिरिषको फूल उपन्यास २०२२ सालमा आफैँले प्रकाशन गरेकी थिइन् । यो पुस्तकले २०२२ सालमा मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गरेको थियो । मेरो विचारमा यो पुस्तकपछि जति लभस्टोरीका पुुस्तक निस्किए, तिनमा यसमा जति प्रेमको बारेमा राम्रोसँग लेखेको पाइएको छैन । यो पुस्तकलाई २०२४ मा संसार र २०३८ सालमा साझा प्रकाशनले पुनः प्रकाशन गरेको थियो । यो पुस्तक अंग्रेजीमा ‘द ब्लूू मिमोसा’ शीर्षकमा अनुवाद भई अमेरिकाको मेरिल्याण्ड विश्वविद्यालयमा पढाई हुन्छ । पुस्तकमा विसंगतिका बीच रुमलिएको जीवनलाई चरित्रचित्रणको मूल आधार बनाइएको छ ।
(सञ्चारकर्मी अच्युत घिमिरेले चयन गरेका तीन पुस्तक)